ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း NLD ဦးတင်ဦးအား ကန်တော့ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း NLD ဦးတင်ဦးအား ကန်တော့ပွဲ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း NLD ဦးတင်ဦးအား ကန်တော့ပွဲ
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 9, 2010 in Myanma News, News | 1 comment
မိုးမခ မီဒီယာမှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးတင်ဦးကို ကန်တော့ပွဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ စင်ကာပူရှိ အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေများကို လက်တိုလိုက်ပါတယ်။ သွားဖြစ်အောင်သွားကြပါ။ အဘ (သူမှတကယ့်အဘအစစ်) ကအသက် ၈၃နှစ်ရှိပါပြီ။ နောင်မှ မဆုံမိလိုက်ရလေခြင်းလို့ မဖြစ်လိုက်ရလေအောင် တခေတ်မှာတယောက် တတပ်မှာတဦးလို့ (စကားအဖြစ်ပြေတာပါ၊ အခြားသော စစ်သားကောင်းတွေလဲ ရှိပါတယ်) ပြောနိုင်တဲ့ ဘဘဦးတင်ဦးကို သွားနှုတ်ဆက်ကြပါလို့။ တဆက်ထဲမှာလည်း အဘဦးတင်ဦးတို့၊ ထောက်လှမ်းရေး မျက်မှန်ကြီးဦးတင်ဦးတို့ကို မှီလိုက်သူများ သိမှီသလောက်ကို ပို့စ်တင်ပေးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ သတင်းအပြည်အစုံကိုတော့ ဒီလင့်ခ်မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Dear members of Burmese community, Singapore
You are cordially invited to the respect-paying ceremony of Thura U Tin Oo. This event is organized to pay tribute to his renowned integrity, honesty, sacrifices and dedication to the democratic cause of our motherland.
Date: 10 Oct 2010, Sunday
Needless to say, Thura U Tin Oo (83 years old) is one of the all-time greatest and finest people’s leaders of Burma. Let’s come together to pay respect to the respectful person. Let’s take this rare opportunity of honouring the honourable person.
Contact: (065) 9227 6490
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၄၀ လောက်ကအင်ဗွီုင်းခန်းမကတပ်မတော်နေ့အခန်းအနားမှာ လာကြည့်တဲ့ကလေးတွေကိုတယုတယ (ကာကွယ်ေ၇းဦးစီးချုပ်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့) နှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုတွေ့ဘူးလို့လေးစားမိပါ၇ဲ့။ ဒ့ါအပြင်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြီး၇င် တပ်မတော်နဲ့ပြည်သူတ၇ပ်လုံးကအထူးချစ်ကြောက်၇ိုသေခြင်းခဲ့၇တဲ့စစ် ခေါင်းဆောင်တဦးပါ။ စင်္ကာံပူမှာမို့လာတွေ့ခွင့်မ၇ပေမဲ့ကျန်းမာေ၇းကအစအတွက်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ “မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကေ၇စီ ၇၇ှိတဲ့အခွင့်အေ၇းထူးကြီးကိုမြင်တွေ့ကြုံကြိုက်ခွင့်၇ပါစေ”…လို့။